AmaTsonga - Inkcubeko yaseMzantsi Afrika
AmaTsonga luhlanga olwaphuma kwezinye iintlanga/izizwe. Ookhoko babo babesuka kwilizwe elibizwa nge Mozambique namhlanje. Bathi bazinza kwilizwe loMzantsi Afrika nge sentyuri 19. Bafika bengamaqela ambalwa bengenazo neenkosi.
Namhlanje, ubuninzi babantu bohlanga lwamaTsonga luhlala kwiindawo ze Lowveld. Le ndawo iphakathi kwamawa nemida yase ntshona ye Kruger National Park.
Ngokwesithethe soluntu lohlanga lwama Tsonga, ukukhetha iqabane kwakungenziwa ngendlela enye ethe ngqo. Kufuneka kulandelwe imigaqo nemithetho ethile kuqala....more
Ezenkolo kunye neeNkolelo Zama Tsonga
Namhlanje linani elingaphaya kwesiqingatha lohlanga lwamaTsonga abahamba iicawe zobuKrestu, ingakumbi iicawe ze Independent Churches okanye iEvangelical Presbyterian Church (neyayi fudula iyi Swiss Mission)....more
Kwiminyaka yoo 1890 iifama zase Lowveld zazingalungelanga nje ukuzingela, nokulima kuphela. Abanini bezi fama bakhawleza bazithengisela abantu abakhangela iiminerali....more
Umculo Wama Tsonga
Uhlanga lwamaTsonga ludume kakhulu ngenkcubeko yalo etyebileyo yomculo. Lenkcubeko isekelwe phezu kwezixhobo ezininzi ezahlukeneyo zomculo. Ezi zingahlulwa kathathu: Ezamasinkari, umoya kunye namagubu....more
Ezoqoqosho Zohlanga Lwama Tsonga
Uhlanga lwama Tsonga olwashiya unxweme nge sentyuri 19 lwazisa iintlobo ezintsha zokutya eTransvaal. Oku kutya okutsha kuquka icassava (manioc), iindidi ezithile zamandongomane, iitapile kunye nemithombo....more
Ubume Beze Politiki ZamaTsonga
Njengokuba abantu abamhlophe bafika banyanzelisa umthetho wabo kwiilali zamaTsonga, amandla eenkosi ehla....more
Vroeë Lewe van die Tsonga
Ukuzalwa komntana lixesha lochulumanco kuluntu lwamaTsonga. Amabhinqa osapho okanye abanye abafazi ibangabo abanceda amabhinqa akhulelweyo kwizigaba zokugqibela zokumitha nasekuzaliseni umntwana....more
Imvelaphi yamaTsonga Origins
Abantu bokuqala abathetha ulwimi lwesiTsonga, kukholeleka ukuba bafika kwindawo eyayisakuba yi Transvaal ngeminyaka ye sentyuri 18....more